Nsonye ntuli aka: Olee otu nchekwube anyị nwere banyere Apple? | Martech Zone
Wednesday, October 12, 2011 Wenezdee, Jenụwarị 1, 2014 Douglas Karr
N'izu gara aga nghoputa bịara na a dị oké mkpa n'oge ma ọ nwere na-jụrụ… ndị mmadụ na-eche na Apple ga-adị ndụ na-enweghị Mr. Jobs na helm? Ọ bụ ajụjụ dị mkpa maka ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ ahịa maka ihe ole na ole… nke mbụ bụ ngwaike nke na-akwado ọtụtụ ụlọ ọrụ mbipụta dijitalụ, nke abụọ na-akwado ngwaahịa Apple (iPads, iPhones, Safari, wdg) na nke atọ, na-emepe ndị ọrụ nke ọdịnihu.
Nzaghachi ndị ahụ dị mma na Apple nwere ọdịnihu siri ike:
Echiche nke onwe m (nke na-ekwesịghị ịkọwa ebe ọ bụ na enweghị m ezigbo ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ ahụ) bụ na akụkụ ihe eji emepụta Apple bụkarị ọrụ okike nke Jonathan Ives ruo oge ụfọdụ. Ebe Maazị Ọrụ pụtara dị ka ihe dị mkpa, agbanyeghị, na-apụ apụ na 1% ikpeazụ… ma ọ bụ arụmọrụ, ogo, ịrụ ọrụ, ma ọ bụ obere nkọwa ọ bụla ọzọ. Ma ọ bụ ezie na ọrụ Mr. Ives dị ezigbo mma, na-enweghị onye isi ọrụ iji kwado 1% ikpeazụ, ndị isi ọhụụ nwere ike ịnwa ịhapụ ihe ka ntakịrị. Ọ bụrụ na ha efunahụ 1% ahụ, agbanyeghị, kaa okwu m… ọ ga-eweta mbibi.
Luckily maka Apple, ọ na-egosi na ahịa bụ nchekwube dị ka nke ọma. Dingzụ ahịa dị elu mgbe Maazị Ọrụ gafere, mana ọ na-egosi na ngwaahịa ahụ nọgidere na-aba uru… nke na-eduga ahịa na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị ọzọ.
Apple ka kụrụ ya obere mgbochiume. Ọ na-egosi na Siri bụ otu ihe na derrière n’asụsụ Japanese. M na ụfọdụ ndị Fans kweere na ọ ga-abụ nnọọ a otito na gbanwee aha Siri ka SteveMa gbanwee olu gị otú kwesịrịnụ.
Tags: oru ntinyeokwukwena-enweghị ọhụụọchaonye njikwa ịre ahịaonye na-ere ahịammekọahụibe edokọbaraWhite
Douglas Karr Wednesday, October 12, 2011 Wednesday, January 1, 2014
Vidiyo: Obere Web Design & Marketing